sida Pi u shaqeeyo
Warqad Cad ++
Qiimaha macdanta Pi coin
Qorshaha heerka macdanta Pi coin
** TBD = in la go'aamiyo.
Kani waa qorshaha heerka macdanta ee Pi coin. Hubi Mainnet, kala badh heerka macdanta, korodhka xubnaha, suurtogalnimada joojinta xubin cusub iyo dhamaadka macdanta.
Marka loo eego kooxda xudunta u ah, qorshaha kore wuu isbedeli karaa. Si kastaba ha ahaatee, Mainnet waxaa la qorsheeyay ka hor dhamaadka 2021. Intaa waxaa dheer, heerka macdanta laga yaabaa in kala bar ama hoos u dhaco eber ee Mainnet iyo marka Pi gaaro 100M isticmaalayaasha.
Aniga Pi oo badan marka ay suurtagal tahay.
La daabacay 2021-10-12 By park996
Waxaa loo kala saaray Pi network Tagged pi qadaadiic kala badh, Pi qadaadiicda macdan qodista, pi mainnet
2021-12-02 saacada 11:52 duhurnimo
2021-11-16 saacada 2:43 subaxnimo
2021-11-12 saacada 1:00 subaxnimo
2021-11-09 saacada 10:30 duhurnimo
2021-10-23 saacada 7:57 galabnimo
2021-10-21 saacada 5:11 subaxnimo
2021-10-26 saacada 4:40 galabnimo
2021-10-20 saacada 9:00 galabnimo
2021-10-20 saacada 8:56 galabnimo
2021-10-18 saacadu markay tahay 8:50 galabnimo
2021-10-17 saacada 10:40 duhurnimo
Faallo u dhaaf Cancel reply
Ciwaanka emailkaaga lama daabici doono Required fields are marked *
Safarka shabakadda Pi
Eeg hareeraha 'Pi block explorer'
wada samee Pi
Pi coin waxay leedahay awood aad u weyn. Pi waa qadaadiic tilifoonka ugu horeysay oo isticmaalayaashu ay ka badan yihiin tobanaan milyan oo si degdeg ah u koraya. Shabakadda Pi waxay haysataa isticmaalayaasha no1 adduunka iyo noodhka lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'.
Weligay ma arag qadaadiic sida Pi oo si siman u qaybisa oo u horumarisa mashruuceeda sidii loo qorsheeyay. Marka 'Open Mainnet' uu kor u kaco oo uu shaqeeyo, shabakadda Pi waxay yeelan doontaa qiime sare oo sarreeya.
Aan wada samayno Pi.
Xeerka Gudbinta Shabakadda Pi
Xogta rasmiga ah ee shabakada Pi
Shabakadda Pi FAQ
Goobta rasmiga ah
Iimayl la xidhiidh
Hadda wax samee